Tourism and Pandemics: Do They Coexist? | Safety
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny indostrian'ny cruise • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Hotels & Resorts • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Naotin'i Resort • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Fizahan-tany sy patematika: miara-miaina ve izy ireo?
Janoary 6, 2021
by Dr. Elinor Garely - manokana ho an'ny eTN sy tonian-dahatsoratra, wines.travel
Fizahan-tany sy patemika
Home » Lahatsoratra » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fizahan-tany sy patematika: miara-miaina ve izy ireo?
Inona no mampiavaka ny COVID-19 amin'ny aretina teo aloha amin'ny hafainganam-pandehan'ilay virus sy ny habetsaky ny fifindra-monina mihoatra ny mpandeha mankany amin'ny toerana halehany? Ny fizahan-tany dia momba ny hetsika. Pandemika dia momba ny fampijanonana ny fielezana.
Tsy maninona na haino aman-jery sosialy, tamba-jotra fahitalavitra, na pirinty ny loharanom-baovao, mazava ny fifandraisan'ny dia sy fizahan-tany sy ny pandemika. Raha tsy manerantany izao tontolo izao, inona no natomboka tany Sina dia hijanona ao Shina; na izany aza, niparitaka ilay viriosy satria nifindra eran'izao tontolo izao ny olona - tamin'ny fiaramanidina sy sambo fitsangantsanganana miaraka amina safidy mifamezivezy an-tanety.
Manafaingana ny fiparitahan'ny aretina ny fitsangatsanganana. Ity fanaparitahana ity dia nitranga nandritra ny tantara voarakitra ary hitohy hamolavola ny vonjy taitra, ny fahita matetika ary ny fizarana areti-mifindra any amin'ny faritra sy mponina. Inona no mahatonga Covid-19 tsy mitovy amin'ny aretina teo aloha tamin'ny hafainganana sy fahatratraran'ilay aretina ary ny haben'ny fifindra-monina ankoatry ny mpandeha mankany amin'ny mponina notsidihina sy ny tontolo iainana ny toerana itodiana? Miparitaka ny areti-mifindra - miaraka amin'ireo mpandeha fizarana aretina arakaraka ny lalan'izy ireo ary iharan-doza amin'ny fahasalamana lehibe izay mety hisy any amin'ireo faritra izay tsy mifanaraka amin'ny fenitra momba ny fahasalamana manerantany sy / na manao fanao tsy fahadiovana sy fidiovana madio.
Ny COVID-19 dia tsy voalohany ary tsy ho farany, miparitaka eran'izao tontolo izao ny aretina amin'ny alàlan'ny dia. Tamin'ny taonjato faha-20 dia efa nanatri-maso pandemika marobe isika toy ny:
1. gripa Espaniola (gripa) 1918-1919
2. gripa aziatika (H2N2) - 1957
3. gripa Hong Kong - 1968
Tamin'ny taonjato faha-21 dia nisy areti-mifindra efatra:
1. SARS - 2002
2. Aretim-borona - 2009
3. MERS - 2012
4. EBOLA - 2013-2014
Ny fikarohana dia manondro fa ny fitomboan'ny valanaretina pesta hatramin'ny 2000 dia mifandraika amin'ny fitomboan'ny fizahan-tany sy ny fivezivezena amin'ny asa manerantany. Ilaina ny fivezivezena amin'ny epidemiolojia sy ny fihanaky ny aretina; Ny fitsangatsanganana dia sady mpandray anjara amin'ny fiparitahan'ny aretina ary misy vokany lehibe eo aminy ny vokany ara-toekarena. Ny zava-misy henjana dia ny tsy fananantsika fitaovana amin'ny taonjato faha-21 hiadiana amin'ny COVID-19. Ny fomba napetraka amin'izao fotoana izao izay ny fiezahana hitazomana ny areti-mifindra dia nampiasaina mba hifehezana ireo valanaretina tamin'ny taonjato taloha ary hanakorontana ara-toekarena. Tsy misy fitsaboana sy miadana fahazoana vaksiny noho ny tsy fisian'ny fitarihana sy famatsiam-bola manerantany miaraka amin'ny tahotra fa fanambarana ara-politika ireo vaksiny fa tsy vahaolana ara-pitsaboana, dia hiasa miaraka amin'ny tontolon'ny otrikaretina virus izao tontolo izao mandritra ny taona maro.
kitiho eto raha hanohy hamaky
Page 1 ny 4 Prev Manaraka